Makiyi ma tatoo uye zvazvinoreva, zvakawanda zvakavanzika - Tatuantes | Kunyora nyora
Makiyi ma tatoo uye zvazvinoreva, zvakawanda zvakavanzika
Nat Cherry | 24/11/2021 12:52 | Zvinhu uye zvinhu nyora
Nhasi muTatuantes tinokurudzira kuti utarise uye udzidze zvakawanda nezvemhando ye tattoo iyo, kwemakore mashoma, yakaitwa ine gap rinokosha kana zvasvika pakubata a. chinhu chinoendesa kuzvipira, kuzvipira kana rusununguko uye kuvimba. Tinotaura nezve nyora nyora.å
Munyaya ino tichaongorora zvinoreva tattoo iyi isu tichigadzirawo gallery ine zvirevo zvakasiyana. Uye zvakare, isu tichaona maitiro ekutora mukana weakakosha ma tattoos uye isu tichataura nezve padlock tattoos, dhizaini ine hukama hwepedyo.
1 Zvinoreva ma tatoo akakosha
1.1 Skeleton key tattoos
1.2 Yakabatanidzwa zvakananga nemapeturu ekuvhara
2 Maitiro ekutora mukana weakakosha ma tattoos
3 Mifananidzo yeKiyi Tattoos
Zvinoreva ma tatoo akakosha
Tichiongorora zvinoreva ma tatoo akakosha, tinowana a chinhu icho, chakaiswa muganda, chinomutsa rusununguko, kuvimba, kuzvipira uye kuzvipira. Mukuwedzera, simba rezvinoreva zvaro rinogonawo kuwedzerwa kana, pedyo nekiyi, tinowedzera zuva rinokosha, zita kana kunyorwa.
Sezviri pachena, uyewo hatingasiyi parutivi chiratidzo chine chokuita norudoSezvo iri dhizaini inokurudzira vakaroora vazhinji kuti vatore tattoo inopindirana, imwe ine kiyi uye imwe ine kiyi. Muchiitiko ichi, izvo tattoo iyi inofananidzira ndeyokuti mumwe munhu ane kiyi yekuzarura mwoyo yedu.
Kune rumwe rutivi, makiyi anogona zvakare kubatanidzwa nechimwe chinhu chisinganzwisisike kana chakavanzika Zvakanaka, zvinokutenderawo kuti uzvibvunze kuti kiyi iyi inofanira kuvhura chii.
Uyezve, makiyi zvakare Ivo chinhu chinomiririra kugona kugadzirisa matambudziko, kunyanya kana izvi zvakaoma.
Isu zvakare tine iyo master key tattoos ayo, kune vasingazive, makiyi ane kugona kuvhura akawanda makiyi mhando imwe chete. Somuenzaniso, muchengeti wechivako, panzvimbo pokutakura makiyi emasuo ose, anotakura rimwe rinogona kuavhura ose.
Makiyi emhando iyi kuChirungu anonzi skeleton makiyi (chaizvoizvo nekuda kwemakiyi master vanoshandisa skeleton yemakiyi akajairwa kuvagadzira), izvo zvinotsanangura kuti batanidza dhizaini yakakosha nedehenya zvakare kufarirwa zvakanyanya. Nokudaro, marudzi aya ematotowo anowanzove akafuridzirwa nezvinhu zvekare, semuenzaniso, nedehenya pamusoro wekiyi, sezvo izvo zvazvino hazvisi kutonhorera.
Chirevo chayakabatanidzwa nacho nemakiyi master ndechekuti dzine uchenjeri hwakakwanasezvo vachikwanisa kuvhura magonhi ose nemakiyi.
Yakabatanidzwa zvakananga nemapeturu ekuvhara
Uye ichokwadi, kunyangwe takambotaura nezve makiyi ma tattoos kare, Hatigone kuregedza chinyorwa ichi tisina kutaura nezvehukama hwayo nema padlock tattoos. Uye ndezvekuti zvinhu zviviri izvi zvinosarudzwa nevakaroorana kuratidza rudo rwavo. Mumwe munhu anonyora padlock uye mumwe kiyi. Chiratidzo chekubatana uye kuti vanhu vose vane hukama hwerudo uye rudo. Naizvozvo, isu tingati iyo tattoo yakakwana kune vakaroorana.
Kunyangwe kubva isu tichitaura nezve padlocks Tinodawo kutaura zvakanyanya nezvezvinhu izvi zvinoshanda kuchengetedza gonhi kana bhokisi rakavharwa. Nokuda kwechikonzero ichi, pamwe chete nemakiyi, vanogona kubatanidzwa nechimwe chinhu chisinganzwisisike kana chakavanzika.
Ndiani asati aona padlock achikiya chimwe chinhu uye akashamisika kuti chii chekuchengeta? Hatizivi kana zvichiitikawo kwauri, asi iyo padlock isingawanike, ndipo patinowedzera kuda kuziva kuziva chekuvanza, revo yavanogovera, sezvatakambotaura, nemakiyi. Kune rumwe rutivi, zvivharo zvekare zvinowanzoshandiswa sezvavanowanzoita sezviri nani pane zvazvino uye zvinovapa manzwiro ekuvanza chimwe chinhu chinonyanya kukosha.
Maitiro ekutora mukana weakakosha ma tattoos
Danho rekutanga pakuziva matorero akakosha ma tattoos ndere kujeka nezve izvo zvatinoda kuti zvifananidzire. Semuenzaniso, hazvina kufanana sezvatinoda kuti zvifananidzire zvedu kugona uye kungwara, iyo iyo dema uye chena dhizaini inogona kutonhorera kwazvo, pane kaviri tattoo kuratidza rudo rwedu kune mumwe munhu, iyo yakati wandei dhizaini inogona kunyatso kusanganisa kana, zvirinani, muchimiro chakafanana seimwe tattoo.
Mukuwedzera, sezvaungaona mune mimwe mienzaniso yatakupa, makiyi anogona kusanganiswa nezvimwe zvikamu. Semuenzaniso, padlock inovhara cheni yakatenderedza chanza kuratidza kuti pane chinhu chakakosha chekudzivirira uye kiyi chaiyo chete ndiyo inogona kuvhura. Mumwe muenzaniso ungave wekubatanidza kiyi ine zita kana zuva kuratidza kuti padlock iyi inomiririra nguva yakakosha uye kuti munhu chaiye chete ndiye anogona kuivhura.
Kunyangwe isu takaona makiyi ma tatoo anogara paruoko rwese kana padlocks akanyorwa tattoo panape, ivo vanowanzo shandiswa kuita tattoo pachikamu chidiki cheruoko, paruoko kana paruoko sezvo vajaira kuita diki.
Kune rimwe divi, makiyi haavhure chero padlock, ndosaka zvakadaro kunyanya kukosha kuterera kune zvese zvese zve tattoo uye ita izvi sezvingabvira. Edza kuti zvaunofarira uye hunhu hwako zvinoratidzwa zvese muchikamu chepamusoro chekiyi uye mumazino anoshandiswa kuvhura magonhi kana kukiya.
Muchidimbu, kiyi (kana kuti pane kiyi?) kuita kuti tattoo itaridzike inotonhorera ndeyekutsvaga iyo chaiyo dhizaini, pasina tsanangudzo yakawanda, asi iyo panguva imwechete inoziva nzira yekufambisa chakavanzika icho kiyi inokiya. Semuyenzaniso, kiyi yegoridhe inobatanidza zvakanaka kwazvo muzvirevo zvine chekuita nerudo, nepo sirivha diki inogona kureva chakavanzika chemunhu. Nzvimbo iyi yakakoshawo, kunyangwe ichi chiri padanho rekunaka chete: sezvatinogara tichitaura, ma tattoo madiki anotaridzika ari nani munzvimbo diki senge wrist, ankle kana ruoko, nepo makuru achitaridzika zvakanaka kumusana, makumbo, chipfuva. …
Tinovimba kuti chinyorwa ichi pane akakosha ma tattoos chakakubatsira iwe kuwana yako yakakodzera tattoo uye yakakukurudzira iwe nezvainoreva. Tiudze, une ma tatoo ekiyi kana ekiyi? Zvinorevei kwauri? Wakambozvibatanidza nechimwe chinhu here?
Mifananidzo yeKiyi Tattoos
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kunyora » Mhando dzematatoo » Zvinhu uye zvinhu nyora » Makiyi ma tatoo uye zvazvinoreva, zvakawanda zvakavanzika
Pineapple tattoos: plasma ichi chinotapira chibereko paganda rako
Butterfly maTatoo, hunhu hune chirevo chakadzika